Da’dee la ii oggolyahay in aan galmo sameeyo? – Tips for refugees
Posted on July 19, 2016 July 19, 2016 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Previous Previous post: Waxaan ahay gabar jirta-16-sanno. Waxaana joogaa dalka Jarmal kaliya dhowr todobaad. Meeshaan wax kasta way ka duwanyihiin sidaan ku bartay. Sidee tahay qaabka nolosha dumarka iyo gabdhaha dalkan Jarmal?
Next Next post: Anigu waxaan ahay qof uur leh. Mana DOONAYO in aan ilmo dhallo. Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo?